ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရဲ့ စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း(၁/၂၀၂၀) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့မနက် ၉ နာရီမှာနေပြည်တော်ရှိ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးချုပ် သင်တန်းကျောင်းမှာကျင်းပခဲ့ရာ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်လှထွန်းတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်… ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာတော့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်လှထွန်းက ယခုသင်တန်းဟာ ...
ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်လတာ အကောင်းဆုံး နည်းပြဆု လမ်းပတ် ရရှိ
ချယ်လ်ဆီး နည်းပြ ဖရန့်လမ်းပတ်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်လတာ အကောင်းဆုံး နည်းပြဆုကို ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်… သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ အတွင်း ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် ၃ ပွဲစလုံးမှာ ရာနှုန်းပြည့် အနိုင်ရပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်လတာအကောင်းဆုံး ...
စက်တင်ဘာ (၁၅)တွင် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ရာသီအပိတ် ပွဲစဉ်များ စတင်မည်
၂၀၁၉ ရာသီ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ပြိုင်ပွဲရဲ့ ရာသီပိတ်ပွဲစဉ်တွေကို လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားမယ်လို့ သိရပါတယ်…. နိုင်ငံတကာပွဲတွေကြောင့် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ပြိုင်ပွဲဟာ တစ်လနီးပါးခန့် နားခဲ့ရပြီး ရာသီပိတ် ပွဲစဉ် ၂၂ နဲ့ အတူ ...
Mr. & Mrs Smith (Movie Promo)
သင်…ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ဘယ်လောက်ကောင်းပါသလဲ…??? ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေကို စမ်းသပ်မယ့် ဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်တဲ့ ကစားပွဲ တစ်ပွဲကို ကြည့်ချင်နေလား ??? ကိုယ်နဲ့ ပြိုင်ရမှာက ကိုယ်၊ ကိုယ်ရဲ့ အားကိုးရာ ကိုယ့်ဉာဏ်ပညာက သိမ်းပိုက်ပေးမယ့် ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း (၁၀၀) ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် Golden ...
ကဲ… ပရိသတ်ကြီးရေ… ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို ပြန်လည်ခံစားနားဆင်ရမယ့် YTV Channel ရဲ့ Studio Live အစီအစဉ်လေး က ကြာသပတေးနေ့ ညနေ (၆) နာရီမှာ ပရိသတ်တွေဆီ အရောက်လာ တေ့ာမှာနော်… ဒီတပတ်မှာတေ့ာ အသံချိုချို ...